Ny Mpanjakan'i Espaina dia manana hafatra manan-danja ho an'ny solontena UNWTO, Espaina ary fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny Mpanjakan'i Espaina dia manana hafatra manan-danja ho an'ny solontena UNWTO, Espaina ary fizahan-tany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny World Tourism Network dia midera ny Mpanjakan'i Espaina noho ny fanohanany ny UNWTO sy ny fizahantany manerantany
Ny Mpanjakan'i Espaina dia manambara fanohanana matanjaka ho an'ny UNWTO ho toy ny fikambanana
Ny fizahan-tany dia Royal Business any Espaina.
Ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy dia mety ho lasa dingana lehibe ho an'ny indostrian'ny olana - World Tourisme.
Eken'i Espaina, firenena mpampiantrano ny World Tourism Organization (UNWTO) izany.
Tsy iza fa ny Andrianjaka Felipe VI, Mpanjakan’i Espaina, no manaiky ny maha zava-dehibe ny fizahantany ho an’ny fireneny sy izao tontolo izao.
Fantany koa fa zava-dehibe ho an’ny firenena mpampiantrano fikambanana iray ao amin’ny Firenena Mikambana ny mitana toerana tsy miandany. Ho an'ny Mpanjaka, ny fampiantranoana sakafo hariva ho an'ny Delegasiona UNWTO dia mandefa hafatra ihany koa fa azo antoka ny fizotry ny fifidianana miafina sy azo antoka ao Espaina.
Espaina vao haingana nanomboka namolavola ny ho avin'ny fizahantany ao amin'ny FII any Riyadh, Arabia Saodita.
Sambany Fiaraha-mientana ara-pizahantany firenena maro, mpandray anjara maro no kintana vaovao tamin'ny COP26 tany Glasgow, rehefa niara-niasa tamin'ny firenena 9 hafa i Espaina mba ho mpiara-miasa amin'ity fiaraha-mitantana ity.
Ny fanjakan'i Espaina, na ny monarkie espaniola, izay antsoina amin'ny lalàm-panorenana hoe The Crown, dia andrim-panjakana misy lalàm-panorenana ary birao ambony indrindra ao Espaina. Ny fitondram-panjaka dia ahitana ny mpanjaka manjaka, ny fianakaviany ary ny fikambanan'ny fianakavian'ny mpanjaka izay manohana sy manamora ny fanatontosana ny andraikiny sy ny zony.
Amin'ny maha-olona eo amin'ny toerany sy ny maha-izy azy, ny Mpanjakan'i Espaina dia afaka maneho hafatra manan-danja amin'ny fanohanana ny indostria (fizahan-tany), sy ny andrim-panjakana. (UNWTO), tsy misy fisehoana fitsabahana, fankatoavana, na fandavana amin'ny olana toy ny latsa-bato miafina ho fanamafisana ny Sekretera jeneraly.
Noho izany, ny fampiantranoan'ny Mpanjaka ny sakafo hariva ho an'ireo solontena amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy manerana izao tontolo izao dia maneho ny hafatra mangina momba ny tsy fiandaniana ary azo raisina ho fanohanana goavana ho an'ny fizahantany manerantany amin'ny ankapobeny.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany manaiky ny maha-zava-dehibe io hetsika io ary namoaka izao fanambarana manaraka izao androany.
Valin'ny WTN amin'ny fanohanan'ny Mpanjaka, Mpanjaka Felipe VI, Mpanjakan'i Espaina, ho an'ny fizahantany manerantany
Honolulu, Hawaii, Etazonia – Ny World Tourism Network dia maniry ny haneho ny fankasitrahany lehibe ny Mpanjaka Felipe VI, Mpanjakan’i Espaina, noho ny fanohanany ny fizahantany.
Dr. Peter Tarlow, Filohan'ny WTN, ary Dr. Taleb Rifai, Mpiaro ny WTN sady Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, dia nanamarika fa niasa mba hanohanana ny indostrian'ny fizahantany manontolo ny Mpanjaka, ary araka ny tokony ho izy ny olona iray manana ny maha izy azy, dia nisoroka ny fankatoavana manokana izy.
Niasa tsy nitandro hasasarana ny Mpanjaka Felipe VI mba hampandrosoana ny indostrian'ny fizahantany.
Ny WTN dia miarahaba ny Mpanjaka Felipe VI ary maneho ny fankasitrahany ny zavatra rehetra nataon'ny Mpanjaka ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany.
Ny World Tourism Network (WTN) no feo efa ela be ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany ary fizahan-tany manerana izao tontolo izao. Amin'ny fampiraisana ny ezaka ataontsika, ny WTN dia mitondra ny filana sy ny hetahetan'ny orinasa madinika sy salantsalany ary ny mpiara-miasa aminy. Ny WTN dia tsy miaro ny mpikambana ao aminy ihany fa manome feo azy ireo amin'ny fivoriana fizahan-tany lehibe. WTN dia manome fahafahana sy tambajotra tena ilaina ho an'ny mpikambana ao amin'ny firenena 128. Fanazavana fanampiny: www.tv.travel